Domestic Injury and Elderly People – My Doctor
အိမ်မှာနေတဲ့ ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတို့ ဖြစ်တတ်တဲ့ မတော်တဆမှုများ
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတဲ့ ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားများဟာ အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေရှိတတ်ပါတယ်။ အသက်ခြောက်ဆယ့်ငါးနှစ်နဲ့အထက် လူကြီးတွေဟာ တစ်နှစ်ကို တစ်ကြိမ်မက ချော်လဲတတ်ကြပါတယ်။ ချော်လဲတိုင်း အသက်အန္တရာယ်ရှိလောက်အောင် ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရမယ်လို့ တစ်ထစ်ချမပြောနိုင်ပေမယ့်
တင်ပဆုံရိုး၊ ပေါင်ရိုးနဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ရိုးကျိုးခြင်း
ပါင်ရိုး နဲ့ ပုခုံးအရိုးလွဲခြင်း
ခေါင်းထိခိုက်မိခြင်း နှင့် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာများရခြင်း
ဖူးယောင်ခြင်း၊ အညိုအမဲစွဲခြင်း၊ ဒဏ်ဖြစ်ခြင်း
တစ်ခါချော်လဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ကြောင့် နောင်မှာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုရမှာကိုကြောက်လန့်သွားခြင်းနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာ အိမ်မှာချော်လဲနိုင်တဲ့နှုန်းဟာ လမ်းသွားရင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုထက် ဆယ့်နှစ်ဆပိုများပါတယ်။
ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတွေ ဘာကြောင့် အိမ်မှာ မတော်တဆမှု ချော်လဲမှုတွေဖြစ်ရသလဲ?
ကွက်သားတွေအားနည်းလာပြီး အရိုးအဆစ်တွေ တောင့်တင်းကြွပ်ဆတ်လာခြင်း
အာရုံခံစားမှုလျော့နည်းပြီး မိမိကိုယ်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် မထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း
ကယ်စီယမ်ဓာတ်နည်းခြင်း ( Calcium ဓာတ်ချို့တဲ့ရင် ချော်လဲတဲ့အခါ အရိုးကျိုးလွယ်ပါတယ်)
အိမ်ထဲမှာ အလင်းရောင် ကောင်းကောင်းမရတာမျိုး၊ ကြမ်းပြင်မညီတာမျိုး၊ ဖျာကဲ့သို့သော အခင်းတစ်ခုခုကြောင့် ချော်လဲထိခိုက်ခြင်း
ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတို့ကို ဒီလိုအိမ်တွင်းထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမလဲ?
အထက်ဖော်ပြပါ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာအများစုဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလို့ရပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေကို ဂရုစိုက်ပြီး ပြုပြင်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတို့ကို ကာကွယ်ပေးရာရောက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတို့ကို ကျန်းမာပြီး လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နိုင်အောင် ၊ဟန်ချက်ညီအောင် အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာစားစေခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်း
ဖိနပ်ကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ ဖိနပ်များသာ စီးစေခြင်း
ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတို့ရဲ့ အိပ်ရာနဲ့ ရေချိုးခန်း၊အိမ်သာ သွားတဲ့လမ်းမှာ အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရှိသင့်ခြင်း
ကြမ်းခင်းများ၊ဖျာများ၊ကော်ဇောများဟာ ပြဲစုတ်နေတဲ့နေရာရှိရင်၊ အစအနများထွက်နေရင်၊ အပ်ချည်မျှင်များထွက်နေရင် ညှိပြီး ချော်လဲနိုင်လို့ ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
လူကြီးတို့ရဲ့ မျက်စိကိုလည်း နှစ်စဉ်စစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာ လူကြီးတစ်ယောက်ချော်လဲခဲ့တယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ချော်လဲတဲ့လူကြီးကို အတင်းဆွဲထူတာမျိုး အလျင်စလိုမလုပ်ပါနဲ့။
ဘယ်နားတွေအနာတရဖြစ်သွားလဲကြည့်ပါ။ေ ချာ်လဲတဲ့ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားကို စိတ်ကိုလျှော့ခိုင်းပြီး အသက်ဝအောင်ရှူခိုင်းပါ။ နှာခေါင်းကလေပြင်းပြင်းရှူပြီး ပါးစပ်ကလေပြန်ထုတ်တဲ့နည်းနဲ့ Deep Breathing နည်းလမ်းသုံးပါ။
အဲဒီအချိန်မှာ အသားအရောင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိမရှိ၊ အနာတရတွေရှိမရှိ၊ ဖူးယောင်ခြင်း ရှိမရှိကြည့်ပါ။
ခေါင်းအောက်မှာ အမှီသဟဲပြုဖို့ cushion တစ်ခုခုနဲ့ခံပါ။
ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားဟာ အလွန်အမင်းနာကျင်ပြီး လုံးဝမလှုပ်ရှားနိုင်ရင် အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ခေါ်ပါ။
တကယ်လို့လှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုရင် သူတို့ကို ကြမ်းပြင်ကနေ ထနိုင်အောင် အကူအညီပေးပြီး ညင်သာစွာ တွဲထူပါ။
ပြီးရင်တော့ဦးခေါင်းကိုထိခိုက်ချင်းရှိမရှိနဲ့ အခြားသော ထိခိုက်မှုတွေရှိမရှိသိရအောင် ဆရာဝန်ပင့်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ လူနာရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းသွားရောက်ပြီးဖြစ်ဖြစ် ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်လို့ အိမ်မှာနေတဲ့ ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတို့ ဖြစ်တတ်တဲ့ မတော်တဆမှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်အောင် အရေးကြုံရင် လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
admin2	2018-05-26T10:39:29+00:00	May 26th, 2018|Categories: All Articles, လူကြီးပိုင်း ကျန်းမာရေး|0 Comments
Why you shouldn’t use emergency pill whenever you make love
Are you in need for glasses
Things to do for women immediately after sex